The most Celebrated Wedding Fair at the Rose Garden Hotel Yangon
ကျွန်တော်တို့Rose Garden Hotel ၌ မေလ ၂၀၁၈ခုနစ်တွင် Myanmar Wedding Talk မှဦးစီးကျင်းပခဲ့သော Wedding Fair အောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပြီး စတ်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ နှင့် ၂ရက်နေ့တို့တွင်လည်း ၂၀၁၈ခုနှစ်အတွင်း ဒုတိယ အကြိမ်မြှောက် Wedding Fair ကိုထပ်မှန်ကျင်းပမည်ဖြစ်တဲ့အတွက်မင်္ဂလာပွဲကျင်းပလိုသော သတို့သားလောင်းနှင့် သတို့သမီးလောင်းတို့အတွက်အထူးသတင်းကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
Wedding Fair ကို စနေနေ့ နှင့် တနင်္ဂနွေနေ့ နံနက်၈နာရီ မှ ည၇နာရီထိ Rose Garden Hotel ရဲ့ အင်ကြင်းခန်းမမှာကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်။ Wedding Fair တွင် Rose Garden Hotel နှင့် Myanmar Wedding Talk မှသတို့သား နှင့် သတို့သမီးတို့အတွက်မင်္ဂလာပွဲတွင်လိုအပ်သော ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဆံပင်နှင့်မိတ်ကပ်ပညာရှင်များ၊ ပစ္စည်းတန်ဆာပလာများကိုတစ်နေရာတည်းတွင်ရနိုင်ရန်ဆိုင်ခန်းပေါင်း ၄၀ ကျော်စီစဉ်ပေးထားသည့်အပြင် နောက်ဆုံးပေါ်မင်္ဂလာဝတ်စုံဒီဇိုင်းတို့ကိုမော်ဒယ်တို့မှ ဝတ်ဆင်ပြသသော ဖက်ရှင်ရှိုးကိုလည်းကြည့်ရှုခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Wedding Fair နေ့တို့တွင် Rose Garden Hotel ၌မင်္ဂလာပွဲအတွက်စရံချရုံဖြင့် ကျွန်တော်တို့ဟိုတွင် ဟန်းနီးမွန်းsuitအခန်း၊ ရေခဲပန်းပု၊ ပန်းအလှဆင်ပေးခြင်း၊ အဆင့်မြင့်မင်္ဂလာကားစီစဉ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Wedding Fair မှာစရံချတဲ့စုံတွဲတွေကို အထက်ပါဝန်ဆောင်မှုများအပြင် ကံစမ်းမဲတွေလဲဖောက်ပေးဦးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် မင်္ဂလာဆောင်မည့် စုံတွဲတွေကိုလာရောက်ကံစမ်းဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်နော်။
1. P.O.Q Myanmar Gems & Jewelry မှမြန်မှာကျပ် ၂,၀၀၀,၀၀၀တန်ဖိုးရှိလက်ဝတ်ရတနာ
2. Myanmar National Airlines မှ ဟောင်ကောင်သို့အသွားပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်
3. Bayview- The Beach Resort, Ngapali တွင် ဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ်တည်းခိုခွင့်နှင့် ၂ ယောက်စာရိုမန့်တစ်ညစာ
4. Amazing Bagan Resort တွင်န်းနီးမွန်းခရီးစဉ်တည်းခိုခွင့်နှင့် ၂ ယောက်စာရိုမန့်တစ်ညစာ
5. Kalaw Heritage Hotel, Kalaw တွင်ဟန်းနီးမွန်းခရီးစဉ်တည်းခိုခွင့် တို့ပါဝင်သည့်အပြင် wedding fair စပွန်စာတို့မှ အခြားသောကံစမ်းမဲများလည်းပါဝင်တဲ့အတွက်အလွန်ရင်ခုန်ဖွယ်ကောင်းတဲ့ပွဲလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
မင်္ဂလာဆောင်ရန်စုံတွဲတို့အတွက် Rose Garden Hotel သည်အသင့်တော်ဆုံးသောမင်္ဂလာခန်းမများစုစည်းရာနေရာဖြစ်ပါတယ်နော်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်အကျယ်ဆုံးခန်းမများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သော အင်ကြင်းခန်းမသည် လူဦးရေ ၈၀၀ ထိဆံ့ပြီး နောက်ဆုံးပေါ်စက်ပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုထားသောကြောင့်လူအများရဲ့အားပေးနှစ်သက်မှုကိုရရှိနေတဲ့ခန်းမလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုတယ်၏ ၇လွှာတွင်ရှိသော စွယ်တော်ခန်းမသည်လည်း လူဦးရေ ၂၀၀ ထိဆံ့ပြီးရွှေတိဂုံဘုရားကိုကောင်းစွာမြင်တွေ့ရသောကြောင့် လူအများနှစ်သက်ကြပါတယ်။ ရေကူးကန်ဘေးတွင်ရှိသော ပန်းခြံအတွင်းတွင်လဲ လူ၁၀၀ စာ ရိုမန့်တစ်ဆန်သော စေ့စပ်ပွဲနှင့် မင်္ဂလာပွဲတို့ကိုလည်းကျင်းပနိုင်ပါသည်။
အခြားသောအချက်အလက်များနှင့် Rose Garden Hotel တွင် Myanmar Wedding Wedding Talk မှဦးစီးကျင်းပသော Wedding Fair 2018 တွင်ပါဝင်နိုင်ရန် Rose Garden Hotel +၉၅၁ ၃၇၁ ၉၉၂ သို့မဟုတ် Myanmar Wedding Talk +၉၅၁ ၉ ၉၉၅၅ ၅၃၁၁ ၅၈သို့ဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
ဘွတ်ကင်တင်ရန်နှင့် အခြားသောအချက်အလက်များအတွက် +၉၅ ၁ ၃၇၁၉၉၂ ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခြင်း သို့မဟုတ် info@theroseyangon.com သို့email ပေးပို့ပြီးစုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
MMK 2,000,000 jewelry and trip to Hong Kong at Rose Garden Hotel Wedding Fair
– After its successful Wedding Fair in May 2018, Rose Garden Hotel will hold its 2nd Wedding Fair organized by Myanmar Wedding Talk on 1st and 2nd September 2018.
From 8:00 am to 7:00 pm on Saturday and Sunday at the Inn Gyin Ballroom, the Rose Garden Hotel Wedding Fair will have everything the bride and groom to-be will need in one location. From hair and makeup to wedding accessories, fashions shows and performances by local celebrities, the team at Rose Garden Hotel and Myanmar Wedding Talk has got you covered! Connect with over 40 of the area’s top vendors as well as attend fashion shows showcasing the latest wedding designs.
During the Wedding Fair weekend, Rose Garden Hotel will have special offers for indoor or outdoor engagements, wedding receptions and dinners with great benefits such as complimentary limousine service, honeymoon suite stay, ice carvings, exclusive flower arrangements and wedding inspired menu with International and Asian dishes.
Lucky couples who confirm their weddings during the wedding fair also stand to walk away with sensational prizes inalucky draw!
1) Jewelry worth MMK 2,000,000 from diamond sponsor P.O.Q Myanmar Gems & Jewelry
2) Return flight ticket to Hong Kong from airline sponsor Myanmar National Airlines
3) Honeymoon stay with romantic dinner for2at Bayview – The Beach Resort, Ngapali
4) Honeymoon stay with romantic dinner for2at Amazing Bagan Resort
5) Honeymoon stay at the historic Kalaw Heritage Hotel, Kalaw.
Also part of the lucky draw is various vouchers sponsored by wedding related services and providers.
“We received such positive feedback from the last wedding fair that we felt this is the right time to haveasecond wedding fair for couples planning their wedding next year.” says Alexander Scheible, General Manager of The Rose Garden Hotel. He added “During the wedding fair, there isagreat atmosphere filled with excitement radiating from our vendors. This isamust do visit for all newly engaged couples.”
Myanmar Wedding Talk, Country Director Thae Thin Zar added “During the wedding fair we offer perspectives and advise on wedding preparations and reviews on all wedding related products. Our intention is to show how newlyweds can find their own identity to inspire to-be married couples”
Rose Garden Hotel has the perfect venues for weddings. The favorite option is the Inn Gyin Ballroom which is one of the largest ballrooms in Yangon that seats over 800 guests with its high ceilings, generous day lighting, and the latest audio and visual systems. The Swe Daw Hall seats 200 guests which is located on the 7th floor the Hall overlooking the Shwedagon Pagoda. The new green gardens overlooking the pool can accommodate 100 guests for couples planningaromantic and intimate engagements and receptions.
For further information or to participate in the Rose Garden Hotel 2018 Wedding Fair organized by Myanmar Wedding Talk please contact our wedding specialist at + 951 371 992 or Myanmar Wedding Talk + 95199955 5311 58
PreviousPrevious post:More value and benefits for the Business TravellersNextNext post:Business isaPleasure